အသားဖြူကုထုံးခံယူဖို့စဉ်းစားနေသလား... - Hello Sayarwon
အသားလေးဖြူရင် ဘယ်လိုနေနေချစ်ဖို့ကောင်းတယ်။ အသားလေးဖြူတော့ ဘာဝတ်ဝတ်လှတယ်ဆိုတဲ့ စကားတွေက အသားဖြူချင်တဲ့ ဆန္ဒတွေကို တဖွားဖွားဖြစ်ပေါ်စေနေတယ်နော်။ ဒါကြောင့် အသားဖြူဖြူလေးနဲ့ ဘာဝတ်ဝတ်လှပြီး ဘယ်လိနေနေချစ်ဖို့ကောင်းချင်လို့ အသားဖြူကုထုံးကို ခံယူဖို့ စဉ်းစားနေပြီလား။ ဒါဆိုရင်တော့ ဘယ်ကုထုံးက အဆင်ပြေဆုံးဖြစ်မလဲဆိုတာကို ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်လိုက်တော့နော်……..
အသားဖြူကုထုံးဆိုတာက အရေပြားပေါ်က အမဲစက်တွေနဲ့ ညိုမဲနေတဲ့ အရေပြားဆဲလ်တွေကို ဖယ်ရှားပေးတဲ့ ကုထုံးပါ။ အမဲစက်တွေ၊အမာရွတ်တွေကိုထိထိရောက်ရောက်ဖယ်ရှားပေးပြီး ဆဲလ်တွေကို အသစ်ဖြစ်ပေါ်စေခြင်းအားဖြင့် အရေပြားကို ဖြူစင်လှပစေတဲ့ ကုထုံးပေါ့။ အသားဖြူကုထုံးက တစ်မျိုးမကရှိနိုင်ပါတယ်။ ဘာတွေများလဲကြည့်လိုက်ရအောင်…….
အသားဖြူဆပ်ပြာကအသားဖြူချင်သူတော်တော်များများရဲ့ ပထမဆုံးခြေလှမ်းပါ။ ရေချိုးရင်းသုံးပေးရုံနဲ့ အသားကို တဖြည်းဖြည်းဖြူလာစေတာပါ။ အချိန်တော့ပေးဖို့လိုပါမယ်။ အသားဖြူဆပ်ပြာသုံးပြီးတဲ့အခါ အရေပြားကို အစိုဓါတ်ထိန်းပေးဖို့ Body Lotion လူးပေးဖို့လိုသလို နေလောင်ကာခရင်မ်ကိုလည်းမေ့ထားလို့မရပါဘူး။
အသားဖြူဆေးထိုးတာက ဟော်မုန်းအပြောင်းအလဲကိုဖြစ်စေခြင်း၊ မယ်လ်လာနင်ထုတ်လုပ်မှုကို ဟန့်တားတဲ့နည်းလမ်းနဲ့ အသားကိုဖြူစေတာပါ။ မယ်လနင်ထုတ်လုပ်မှုကိုလျှော့ချတဲ့ အသားဖြူကုထုံးတစ်ရပ်ပေါ့။
လူသိများတဲ့ အသားဖြူကုထုံးတစ်ခုပေါ့။ ဓါတုပစ္စည်းသုံးပြီး အပေါ်ယံအရေပြားပေါ်က ဆဲလ်သေတွေကိုဖယ်ရှားတဲ့ နည်းလမ်းပါ။ အရေပြားပေါ်က အမာရွတ်နဲ့ အမဲစက်တွေကိုလျော့ပါးစေနိုင်ပါတယ်။
Detan Facial ကုထုံး
ဒီကုထုံးက အသားအရေမညီတာတွေအတွက် အထူးသင့်တော်ပါတယ်။ ဓါတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းတွေကိုသုံးပြီး အသားအရေကို ညှိပေးတာပါ။ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်နဲ့ထိတွေ့တာကြောင့် ညိုမဲနေတဲ့အသားအရေတွေကို အကောင်းဆုံးပြုပြင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အရေပြားအတွင်းပိုင်းထိ အာဟာရဖြည့်ပေးပြီး ကော်လာဂျင်တွေ ထွက်လာအောင် လှုံ့ဆော်ပေးမှုကနေတဆင့် အသားအရေကို ကြည်လင်စေတာပါ။
သဘာဝအဆီအနှစ်တွေကို အသုံးပြုပြီး အသားအရေမညီညာတာနဲ့ အမဲစက်တွေကို သက်သာအောင်လုပ်ဆောင်ပေးတဲ့ ကုထုံးပါ။ အာရှဒေသတွင်းမှာ လူကြိုက်များတဲ့ကုထုံးတစ်ခုပေါ့။ အာရှအသားအရေနဲ့ အသင့်တော်ဆုံးကုထုံးဆိုလည်း မမှားပါဘူး။
လေဆာရောင်ခြည်ကို အသုံးပြုပြီး အရေပြားတွေကို တစ်လွှာချင်းဖယ်ရှားပေးတဲ့ကုထုံးပါ။ အပေါ်ယံအရေပြားလွှာပေါ်က ပျက်စီးနေတဲ့ ဆဲလ်တွေ ကို လေဆာရောင်ခြည်သုံးပြီး ဖယ်ရှားတာပါ။
အသားဖြူထုံး ခံယူဖို့ အသင့်တော်ဆုံးသူတွေက ဘယ်သူတွေများလဲ…………….
နေလောင်ဒဏ် ကြောင့် အသားအရေညိုမဲပျက်စီးနေသူတွေ
အပြစ်အနာအဆာကင်းပြီး ဖြူစင်ဝင်းပတဲ့ မျက်နှာအသားအရေကို ပိုင်ဆိုင်လိုသူတွေ ခံယူသင့်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ သတိထားရမယ့်အချက်လေးတစ်ခုကတော့ အသားဖြူချင်လို့ ကုထုံးခံယူမယ်ဆိုရင် တတ်ကျွမ်းနားလည်သူတွေထံမှာခံယူဖို့ပါ။ ဒါမှ ဆိုးကျိုးမရှိဘဲ ဖြူစင်ဝင်းပတဲ့ အသားအရေကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာပါ။